बिचार Archives - Page2of 8 - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
जे.पी.केरुङ राजनीति एउटा यस्तो सशत माध्यम हो, जसले समाज र राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्दछ ,उतm रुपान्तरणको निर्धारण राजनीतिक व्यतिmत्वले गर्दछ भन्दा अत्युतिm नहोला । विश्व घटनाक्रमको ईतिहास देखि वर्तमानसम्म अध्ययन गर्दा राजनीति भन्दा राजनीतिक व्यतिmत्वले महत्व भुमिका खेलेको देखिन्छ त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि राजनीति साधन मात्र हो साध्य होईन । जतिखेर प्रभावशाली ...
हिन्दुहरुले विश्वास गरिआएको तेत्तीस करोड देविदेवताको वैज्ञानिक प्रमाणिकरण आजसम्म कहिँपनि भएको छैन । छ त केवल मुर्ती अनि मंदिरहरु । ती मध्ये प्रख्यात मंदिर र मंदिर भित्र रहेका अधिकांश मुर्तीहरुका बारेमा अहिले पुरै हिन्दुस्तान (भारत)मा खलवली हुनेगरी बिवाद आईरहेको छ । जसमध्ये सवैभन्दा ज्यादा बुद्धिष्टहरुले आफ्नो चैत्यविहारहरुलाई हिन्दुले कब्जा लिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । भारतको बद्रिना...
सुशासन कायम गर्न कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिका
अम्वादत्त भट्ट कर्मचारीतन्त्रको मुलभूत दायित्व तथा कर्तव्य भनेको जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो । आफ्नो सम्पूर्ण समय जनसेवामा समर्पित गर्ने जनसेवक पनि जनताको छोरा र छोरी भएकाले उनिहरुका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कर्तव्य राज्यको हो । हामी अहिले समाजवादोन्मुख नेपाली समाज निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । समाजवाद स्थापनाको पहिलो शर्त आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार खड...
प्राचीन मानव सभ्यता र चिहानवीचको सम्बन्ध
लेखक भीम केरुङ मानव जीवनमा मृत्यु संस्कार अन्तिम संस्कार भएकोले यो अभिन्न र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानिसको मृत्युु भएपछि अन्त्येष्टि गर्ने परम्परागत विधिमा लासलाई जलाउने र जमिनमा गाड्ने यी दुई व्यवहारमा प्रमुख छन् । समयको विकासक्रमसँगै अन्तिम संस्कार विधि पनि परिस्कृत बन्दै गएको छ । दाहसंस्कारका लागि केही खोलानदी किनारमा शवदाह गृहहरूको निर्माण राज्यस्तरबाट भएपनि पर्याप्त, समयसापे...
रुपन्देही, १५ भदौ (रासस) ः गौतम बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि शोकमग्न भिक्षुहरुसँग सुभद्र नामक एक भिक्षुले भने – “भिक्षुहरु, शोक नगर, रोदन नगर ! हामीहरुले महाश्रमणबाट छुटकारा पाएका छौं । उनी हुँदा जहिले पनि ‘यो गर, यो नगर’ भन्थे तर, अब हामी जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने भएका र्छौं ।” सुभद्र भिक्षुको यो वचन सुनेर सबै भिक्षुहरु छक्क परे । बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि सद्धर्मको नाश हुने डर भयो । भिक्षु...
प्रदेश लोकसेवा आयोग कस्तो बनाउने ?
नेपालको संविधानले संघीय कर्मचारीतन्त्रकोलागि लोक सेवा आयोग र प्रदेश तथा स्थानीयतहकोलागि प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेर नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा मेरिट प्रणालीलाई सुरक्षित गरेको छ भने राज्य सञ्चालनका प्रत्येक तहमा समानुपातिक समावेशीको नीति लिएर निजामती सेवालाई बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउने उद्देश्य पनि संविधानले राखेकोछ । मेरिट र समावेशी प्रणालीको व्यवस्थाले सक्षम प्रतिनिधिमूलक सार्...
असमावेशी विज्ञापनमा किन चुप मधेशी दल ?
नेपालको संविधान आफैमा पूर्ण छैन । तर, जुन राम्रा पक्षहरू छन् त्यसलाई पनि लोकसेवा आयोगले उल्लंघन गर्दै गइरहेको अवस्था छ । नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट आएको समानुपातिक समावेशितासहितको संघीयतामाथि नै प्रहार गर्ने गरी लोकसेवा आयोगले असंवैधानिक विज्ञापन गरेको हो । यसको विरूद्धमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका घोषणा भएको छ । यस विज्ञापनलाई खारेज गर्नका लागि राज्य व्यवस्थाको समितिले लोकसेवा आयोग र सामान्...
प्रदेश सरकार बनेको डेढ वर्ष पुगेको छ । मैले भनिरहनु पर्दैन, संविधान घोषणापश्चात् पहिलोपटक नेपालमा संघीयतामा हामी गएका छौं । त्यसलाई संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउन हामी लागिरहेका छौं । त्यसैले प्रदेश संरचना नितान्त नयाँ संरचना हो । हामीले शून्यबाट काम गरिरहेका छौं । हामी सबै नयाँ ढंगले सिर्जनात्मक ढंगले अघि बढिरहेका छौं । त्यो जिम्मेवारी इतिहासमा हामीले पहिलोपटक पाएका छौं । यो जिम्मेवारी प...
महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका–४ भ्रमणपूरा गाउँका भोला शर्माको चार कठ्ठा पूख्र्यौली जग्गा थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण स्कुल पढन सकेनन् । तरपनि एक्लो बहिनी सिमा शर्माको विवाह गरिदिने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आइप¥यो । विवाहको निम्ति कुरा चल्यो, र टुङगो समेत लाग्यो । तर कुसंस्कारकै रुपमा चलिआएको भएपनि सामाजिक परम्पराअनुसार कुटुम्बलाई दहेज दिनैपर्ने भयो । दहेज छोरीलाई होइन, ज्वाईंलाई ...
जोखिम मोलेर यात्रा गर्दै तीर्थयात्री
बेनी–जोमसोम सडकखण्डको म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना पर्ने काभे्रभीरमा गएको पहिरोले क्षति पु¥याएको सडकबाटै जोखिम मोलेर यात्रा गर्दै मुक्तिनाथ जान हिँडेका तीर्थयात्री । पहिरोका कारण असार २७ गतेदेखि बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध भएको छ । तस्वीर ः धु्रबसागर शर्मा ...